Yakakosha "Zuva Rekupa yeEcuador" kubatsira avo vakawirwa neCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Ecuador Breaking Nhau » Yakakosha "Zuva Rekupa yeEcuador" kubatsira avo vakawirwa neCOVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Ecuador Breaking Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nemusi weChina, Chikunguru 15, 2020, masangano asingabatsiri Por Todos neSOS Ecuador vachabatana kuzotangisa zviri pamutemo "Zuva Rekupihwa Ecuador" kubatsira avo vakanyanya kubatwa nematambudziko ehupfumi ane hukama ne Covid-19. Nemakesi ecoronavirus akakwirira muLatin America, apfuura zviuru makumi mashanu nezvishanu uye zviwanikwa zvishoma zvinoparadza nyika, zvakakosha kusimudzira ruzivo uye mari kune avo vanonyanya kuda. Ecuador iri kusangana nehupfumi hwakawanda uye hwehukama husina magumo.
“Kubatsira kumushandirapamwe uyu kune maitiro maviri; kune rimwe divi inotsigira Ecuador panguva iyo painotarisana nemamiriro ezvinhu akaoma kwazvo ehupfumi munhoroondo yayo. Kune rimwe divi, zvinodzosa tariro kuzviuru zvemhuri dzeEcuadorian ”, akadaro Mumiriri weEcuador kuUS Ivonne Baki. "Ndinodada kutsigira Chikunguru 15 se 'Zuva Rokupa' rakatemwa kuEcuador."
Musi waChikunguru 15, zviri nyore kuita kunyange mupiro mudiki unozoita mutsauko mukuru. Ecuador inodaidzira rubatsiro rwako mukubatsira kwavo kumisa kupararira kwecoronavirus mumusha une simba munyika kune zvinokatyamadza zveGalápagos Islands uye neinoshamisa Cloud Masango.
Muvambi wePor Todos Roque Sevilla anoti, “Hondo iyi yatiri kurwira iri kutibata tese. Hatifanire kudzivisa maziso edu, asi kumira takabatana apo patinomuka kuchokwadi chitsva kuti denda rinotyisa iri harizopfuuri kusvikira taripedza mukona dzese dzenyika. Kunyangwe kufambira mberi kukuru kwakaitwa nemipiro kuchikwama chedu kubva pasirese, pachine basa rinofanira kuitwa. ”